gaabinta : UCL
aasaasay : 1826
Ardayda (qiyaastii.) : 36000
Ha iloobin in aad wada hadlaan University College London
Qor at University College London
UCL la aasaasay 1826 in la furo ilaa tacliinta sare ee England si ay kuwii la saaray waxaa ka - noqoshada jaamacadda ugu horeysay ee England si ay u galin Haweenka ardayda siman kula jooga dadka oo in 1878.
heer sare Waxbarashada iyo cilmi-baarista ka hadlaysa dhibaatooyinka nolosha dhabta wargeliyaan our asal ahaan ilaa maantadan la joogo oo waa udub dhexaad u our istaraatijiyad 20-sano, UCL 2034.
UCL leedahay tacliinta ugu fiican ee ratio ardayga ee UK (1:10), awood Fasalo yaryar iyo taageero shaqsi fiican (Times 2013).
UCL waa mid ka mid ah laba jaamacadaha ugu sareeya ee UK ee tirada Professor, taas oo macnaheedu yahay in ardayda waxaa la baraa by ugu heer sare ah oo aqoon leh khubaro in ay duurka (Higher Education Agency Statistics 2011).
UCL bixisaa jawi ardayda ugu dhiirigalinaya inay noqon hami weli idealistic. In 2013 oo keliya, ardayda UCL ka qeyb galay 41,500 saacadood oo shaqo tabaruc ah oo calan kor u 80 shirkadaha bulshada iyo 25 ganacsiyada ardayga.
UCL wuxuu ka kooban yahay dad cajiib ah: Professor qudbad iyo ardeyda baahida gaarka ah; xirfadlayaasha ka qaybgalka dadweynaha iyo farsamo shaybaarka, iyo dhammaan xubnihii kale ee xujo ah uu ka samaysan yahay jaamacad keentay.
Kuliyada Arts & Humanities
UCL Kuliyada The of Arts & Humanities waa xarun caan ah oo heer sare ah, halkaas oo cilmi-baaris ah oo tayo leh adduunka oo keentay si toos ah ayaa cunto siiya galay dhammaan barnaamijyada waxbarasho.
Ardaydu waxay ka faaiidaystaan, ballaadhkiisuna multi-anshax waxbaridda ka meelaha sida English, Philosophy, Greek & Latin, Hebrew & Studies Yuhuudda oo ay la socdaan in ka badan 20 luuqadaha casriga ah Yurub. Barnaamijyada waxaa laga helayaa xarumaha our kala duwan ee cilmi-baarista la heli karo, iyo macalimiinta ayaa sidoo kale marti School Slade ee Art Fine, taas oo si joogto ah wax ugu daro Doodda noole ee farshaxanka casriga ah, labada qaran iyo caalami ah.
Waxaanu higsanaynaa in aanu awood ardayda in ay raacaan danaha waxbarasho gaar ah iyo in maskaxda iyo shakhsi ahaan horumarinta labadaba.
Arts UCL & Sciences (Basco)
UCL Luqadda Ingiriisiga & Suugaanta
UCL European Social & Studies Siyaasadda
UCL Hebrew & Studies Yuhuudda
UCL Studies Information
UCL School of Languages ​​Yurub, Dhaqanka iyo Bulshada
UCL Slade School of Art Fine
Bartlett The, UCL ee Kuliyada Deegaanka dhisay
Waxaan nahay Bartlett ah: awood caalami ah oo deegaanka ka dhisay UCL ee. qaybaha Our billawdaan meesha oo dhan oo waxbarasho iyo cilmi-baarista. Shakhsi ahaan, waxay keeni beerahooda. In iskaashi, waxay cadaadinaya arrimaha adduunka horumarinta jawaabo cusub. Sida dhan ah, ay matalaan a dunida-hoggaamineed, awood xirfadaha, midoobin ruuxa xagjirka ah ee UCL.
dugsiyada iyo qaybaha Our dabooli nidaamo ka naqshadaha iyo qorshaynta, tamarta iyo koonfurta caalamka, oo iyana dhammaantood waxay u sameeyaan awood ugu dhamaystiran oo cusub ee UK ee deegaanka dhisay.
Waxaan bixinaa kala duwan oo ay ka buuxaan barnaamijyada beerta ku dhisay deegaanka, ka undergraduate in wadashada, iyo sidoo kale at MRes iyo heerarka phD. Waxaan sidoo kale u ordaan kala duwan oo ka mid ah dugsiyada xagaaga iyo koorsooyinka aasaaska iyo horumaro barnaamijka waxbarashada fulinta hogaamiyayaasha mustaqbalka ee xirfadaha deegaanka dhisay.
UCL Bartlett Center for astaanta Falanqaynta Advanced
The Unit Qorshaynta Horumarinta Bartlett UCL
Bartlett School UCL ee Architecture
Bartlett School UCL The of Construction & Maamulka mashruuca
Bartlett School UCL The Qorshaynta
UCL Institute for Design Environmental iyo Engineering
UCL Institute for Global Barwaaqada
UCL Institute for Heritage Sustainable
UCL Space Saan Laboratory
Kuliyada Brain Sciences
UCL Kuliyada The of Brain Sciences fulisaa cilmi dunida-sare iyo waxbaridda meelaha u dhaxayn wadooyinka neural loo isticmaalaa in lagu xakameeyo hawlaha jidhka (e.g. maqalka, araggii iyo hadalkii) in garaadka iyo cilmi nafsiga, taas oo loo go'aamiyo dabeecadda aadanaha.
Waxaan aqoonsan yahay madaxda adduunka ee beerahayaga iyo shaqada jiidata shaqaalaha iyo ardayda ka dunida dacaladeeda. The awood iyo qaybo ay qayb ka abuuraan jawi aad u fiican oo firfircoon waxbarasho iyo cilmi-baarista.
UCL uu yahay quwad cilmi Europe ee neuroscience. Waxaan kaalinta labaad ee dunida, iyo ugu horeysay ee Europe, in neuroscience iyo dhaqanka by Thomson ISI Muujiyeyaasha Science Muhiimka ah, iyadoo in ka badan laba jeer publications iyo xigashooyinka ugu badan ee haya'daha kale ee Yurub kasta. cilmi UCL Neuroscience dhalin badan 30% ee ka qayb qaateen dalka ee qoraallada ugu daliishaday in neuroscience, ka badan laba jeer sida ugu badan ee jaamacad kasta oo kale oo. In neuroimaging iyo neurolojiga clinical, UCL saarta 65% iyo 44% ee ka qayb UK ee waraaqaha ee caalamka ugu heer sare daliishaday, shan jeer in ka mid ah ugu sareeya hay'adda soo socda UK.
The Kuliyada Brain Sciences oo ay la socdaan Caqlina Life Sciences, Medical Science iyo Health Sciences Population isu geeyo si ay u sameeyaan ugu School of Life & Sciences Medical. School waa mid ka mid ah aggregations ugu weyn oo ugu caansan ee tacliinta ay duurka iyo sumcad caalami ah buu u leeyahay waxbaridda ku wargeliyay by jarida-ku laayeen cilmi. SLMS Domains The koobi ballaadhkiisuna wuxuu ahaa hawlaha cilmi-guud School gudahood sagaal koox core. cilmi Tan waxaa loo sameeyay iyadoo lala kaashanayo qaybaha kale ee UCL oo ay taageerayaan iskaashi la isku halleeyaa our NHS, golayaasha cilmi, hay'adaha samafalka iyo warshadaha.
UCL Engineering samatabbixiyaa cilmi-baarista iyo tababar ee dhammaan dhinacyada kala duwan ee dunida casriga ah. Daraasado hore oo shaqada halkan soo saaray soosaarid tallaalka degdeg ah, isgaarsiinta fibre-optic iyo kaabayaasha ee internetka, oo waxaan sii wadaynaa inaan samatabbixiyo tabo cusub dunida-beddelo.
ardayda iyo shaqaalaha waxaa laga ceshay, sida tahay waxbarasho iyo ganacsi-hawlgalayaasha. barnaamijyada cilmiga ay diiradda saaraan maaddooyinka in ay leeyihiin saamayn on adduunka inagu xeeran, halka ay content waxaa hogaamiya cilmi-ugu wanaagsan ee caalamiga ah. Xubno ka mid ah macalimiinta ugu isticmaalaan aqoontooda guud ahaan machadyada iyo xarumaha Engineering ee, gudahood UCL, iyo in adduun weynaha.
UCL baayo Engineering
UCL Civil, Deegaanka & Engineering Geomatic
UCL Sayniska Kombiyuutarka
UCL Electronic & Engineering korontada
UCL Farsamada Engineering
UCL Medical Physics & bayoenjineering
UCL Science, Technology, Engineering iyo Siyaasadda Dadweynaha
UCL Security & Science Crime
Machadka UCL The of Education waa dugsi dunida-horseedka u ah waxbarashada iyo cilmiga bulshada. la aasaasay 1902, waxaan hada in ka badan 7,000 ardayda iyo 1,000 shaqaalaha. Waxaan si firfircoon uga dhex qaarad kasta.
In ka 2016 qiimeynta QS, waxaan la dhigay ugu horeysay ee adduunka ee waxbarashada ee sannadka soo ordaya saddexaad, ka hor Harvard, Stanford iyo Melbourne. Waxaan la siiyay ee Queen ayaa Guuradii Prize Tacliinta Sare oo dheeraad ah 2014-16 for our "qayb siyaasadda iyo dhaqanka ah waxbarashada la gaarin heerka caalami ee agagaarka cilmi bulshada cusub".
Waxaan u tababaran ka badan 10,000 macalimiinta sano ee la soo dhaafay iyo in January 2014, naloo aqoonsan Ofsted for our 'aad u fiican’ tababarka macalimiinta hore ee Faraj kasta ee guud ahaan aasaasiga ah, waxbarashada dugsiga sare oo dheeri ah.
In Jimicsiga Assessment Research ugu dambeeyey, saddex-meelood laba ka mid ah daabacaadaha aan soo saarno waxaa lagu xukumay in uu noqdo caalami ah la taaban karo iyo in ka badan saddex meelood oo meel waxaa lagu xukumay in uu noqdo 'dunida taasoo keentay ". Natiijooyinka of our baaris tayo sare leh ayaa u saameeyay hawlaha dawladda iyo siyaasadda meelaha ka sanadaha hore in ay tacliinta sare iyo waxbarashada goobta shaqada. Waxaan marka hore kaalinta xoog cilmi waxbarasho ee UK.
Waxaan sidoo kale ku takhasusay waxbarashada iyo cilmi-baarista ee caafimaadka, cilmi nafsiga iyo cilmiga gaadhya, ka mid ah meelaha kale ee cilmiga bulshada. Our waxbarashada askartii saddex dhalashada ayaa saameyn weyn sannado badan oo ku saabsan siyaasadda caafimaadka, sinaanta jinsiga iyo dhallinyarada.
manhajka, Barbaarinta iyo Qiimeynta
Barashada iyo Hoggaanka
Dhaqanka, Isgaarsiinta iyo Warbaahinta
Psychology iyo Horumarinta Aadanaha
Waxbarasho, Practice iyo Society
Sharciyada UCL waa mid ka mid ah dugsiyada sharciga keentay dunida ee. Waxaa ka go'an in ay adag u, multi-anshax iyo daraasad cusub oo sharciga in dhamaan dhinacyada ay, iyadoo fiiro gaar ah in macnaha guud ee caalamka, taas oo sharciga ka shaqeeya.
cilmi baaris sare loo qiimeeyo ee macalimiinta ayaa ka dhigaysa qayb ka mid muhiim u ah tayada cilmiga iyo kormeerka ee ardayda. Waxa kale oo ay gacan ka geysaneysaa horumarinta sharciga, halka qaabaynta dhaqanka sharciga iyo siyaasadda guud.
Our saldhig London waxay bixisaa fursad fiican u soo jiidi on khayraadka ah magaalo xarun sharciga UK ee, ganacsiga, maaliyadda iyo dhaqanka.
Kuliyada Life Sciences
UCL Kuliyada The of Life Sciences fulisaa cilmi dunida-sare iyo baridda, kaas oo isku daraa xoogga ee cilmiga noolaha iyo preclinical aasaasiga ah ee UCL. Our shaqo jiidata shaqaalaha iyo ardayda oo dunida ku baahsan, oo iyana dhammaantood waxay abuuraan jawi aad u fiican oo firfircoon ee ardayda iyo cilmi labada. macalimiinta ayaa ka kooban Qaybta biosciences, School UCL ee Farmashiyaha, MRC UCL ku Laboratory waayo, kelli Cell Biology iyo Gatsby xisaabeed Neuroscience Unit.
The Kuliyada Life Sciences oo ay la socdaan Caqlina Brain Sciences, Medical Science iyo Health Sciences Population isu geeyo si ay u sameeyaan ugu School of Life & Sciences Medical. School waa mid ka mid ah aggregations ugu weyn oo ugu caansan ee tacliinta ay duurka iyo sumcad caalami ah buu u leeyahay waxbaridda ku wargeliyay by jarida-ku laayeen cilmi. SLMS Domains The koobi ballaadhkiisuna wuxuu ahaa hawlaha cilmi-guud School gudahood sagaal koox core. cilmi Tan waxaa loo sameeyay iyadoo lala kaashanayo qaybaha kale ee UCL oo ay taageerayaan iskaashi la isku halleeyaa our NHS, golayaasha cilmi, hay'adaha samafalka iyo warshadaha.
Kuliyada Xisaabeed & Physical Sciences
The Kuliyada Xisaabeed & Sciences Physical koobay macquul ah, waxbarasho tijaabo ah iyo xisaabta of our caalamka. cilmi Front-line si toos ah ayaa cunto siiya galay barnaamijyada waxbarashada our, iyo ardayda ka faa'iidaysan helitaanka qalabka fasalka-koowaad shaybaarka. macalimiinta waxay bixisaa soo diyaariyeen ah ee seddex sanno BSc iyo afar-sano Master's heerka digrii MSci ee soo baxaya iyo sidoo kale meelo badan oo dhaqameed tacliimeed.
macalimiinta waxay bixisaa saldhig u ah dhowr xarumood oo cilmi. Kuwani fududeeyo qoto-dheer, cilmi maadooyinka loo marayo iskaashi u dhexeeya khubaro gudahood kuliyadda, iyo meelaha la xiriira in Engineering iyo Life Sciences. macalimiinta ayaa sidoo kale wuxuu leeyahay barnaamij degree wasaaradaha u gaar ah: Sciences Dabiiciga ah.
UCL Sciences Dabiiciga ah
UCL Physics & xiddigaha
UCL Science & Studies technology
UCL Space & Physics Cimilada (Mullard Space Science Laboratory)
UCL tirokoobka Science
UCL Kuliyada of Medical Science isu keentaa UCL School Medical iyo toddoba ka mid ah kooxihii iyo machadyada UCL ee, abuuro quwad ah oo cilmi sayniska caafimaadka iyo waxbarashada.
Shaqaalaha kuliyadda qaataan cilmi dunida-sare iyo waxbaridda meelaha u dhaxayn kansarka viral cudurka unugyo iyo caafimaadka afka. The awood iyo qaybo ay qayb ka abuuraan jawi aad u fiican oo firfircoon waxbarasho iyo cilmi-baarista.
The Kuliyadda Sayniska Caafimaadka oo ay weheliyaan Caqlina Brain Sciences, Life Sciences, iyo Sayniska Caafimaadka Dadweynaha isu geeyo si ay u sameeyaan ugu School of Life & Sciences Medical. School waa mid ka mid ah aggregations ugu weyn oo ugu caansan ee tacliinta ay duurka iyo sumcad caalami ah buu u leeyahay waxbaridda ku wargeliyay by jarida-ku laayeen cilmi. SLMS Domains The koobi ballaadhkiisuna wuxuu ahaa hawlaha cilmi-guud School gudahood sagaal koox core. cilmi Tan waxaa loo sameeyay iyadoo lala kaashanayo qaybaha kale ee UCL oo ay taageerayaan iskaashi la isku halleeyaa our NHS, golayaasha cilmi, hay'adaha samafalka iyo warshadaha.
Kuliyadda Sayniska Caafimaadka Dadweynaha
UCL Kuliyada The of Sciences Caafimaadka Dadweynaha isu keentaa khibrad Caafimaadka Carruurta, Haweenka iyo Caafimaadka Taranka, Population Caafimaadka, Global Health, Maxkamadeyn Clinical, Aqbaarta Caafimaadka iyo Science Wadnaha. Hadafka laga leeyahay waa in la hirgaliyo cilmi-baarista iyo waxbaris heer for hagaagay caafimaadka aadanaha, iyo fikradda mideynaya in wargelinaysaa ay deeq waxbarasho iyo waxqabad waxbarasho waa kooras nolosha.
cilmi macalimiinta ee elucidates noolaha ah, hababka dabeecadeed iyo mid nafsaani ah in shaqeeyaan guud ahaan nolosha qofka, iyo jiilalka, in saamayn horumarinta cudurka in dadka. Cilmi wargelinaysaa undergraduate, postgraduate iyo waxbarashada xirfadaha.
The Kuliyadda Sayniska Caafimaadka Dadweynaha, oo ay la socdaan Caqlina Brain Sciences, Life Sciences iyo Medical Science isu geeyo si ay u sameeyaan ugu School of Life & Sciences Medical. School waa mid ka mid ah aggregations ugu weyn oo ugu caansan ee tacliinta ay duurka iyo sumcad caalami ah buu u leeyahay waxbaridda ku wargeliyay by jarida-ku laayeen cilmi. SLMS Domains The koobi ballaadhkiisuna wuxuu ahaa hawlaha cilmi-guud School gudahood sagaal koox core. cilmi Tan waxaa loo sameeyay iyadoo lala kaashanayo qaybaha kale ee UCL oo ay taageerayaan iskaashi la isku halleeyaa our NHS, golayaasha cilmi, hay'adaha samafalka iyo warshadaha.
UCL Bulshada & Historical Sciences awood
UCL Kuliyada The of Social & Historical Sciences ka dhigan meel ka mid ah aqoon meesha aadamaha iyo kulmaan sayniska. Danaha iyo hababka oo ka mid ah sagaal waaxaha qayb bixiyaan fursado wanaagsan cilmi-baaris cusub oo iskaashi.
Mid kasta oo ka waaxyaha uu leeyahay awoodaha cilmi waaweyn ee ay anshaxa gaar ah. Qaar ka mid ah 200 shaqaalaha tacliinta ka qayb qaataan hawlaha baridda guud ahaan kuliyadda iyo hawlaha cilmi baarista waxaa kaabaya kuwa ku dhow 100 shaqaalaha cilmi. waaxaha ayaa sidoo kale door weyn ka network sii kordhaysa ee xarumaha cilmi-baarista maadooyinka UCL ee.
UCL Institute of Ameerika
UCL Institute of Qadiimiga
UCL Cilmiga Siyaasadda
UCL School of Slavonic & Studies Yurub East
UCL waxaa la aasaasay on 11 February 1826 magaca Jaamacadda London sida kale cilmaani in jaamacadaha diinta ee Oxford iyo Cambridge. WakiilShaahida horeysay University London ee ahaa Leonard Horner, kuwaas oo ahaa saynisyahan ugu horeeyay ee madax jaamacad British.
In kasta oo aaminsan caadi ahaan lagu qabtaa in falsafo Jeremy Bentham ahaa aasaasihii UCL, uu ku lug toos ah ayaa waxaa ku koobnayn iibka ah ee share No.633, qiime dhan £ 100 mushaarka badan sagaal qaybood u dhaxaysa December 1826 iyo January 1830. In 1828 oo uu ku sameeyey magacaabi saaxiib inay fadhiistaan ​​golaha, iyo in 1827 isku dayay inuu xertiisa John Bowring magacaabay professor ugu horeeyay ee Soomaali ah ama Taariikhda, laakiin labada jeer musharax ahaayeen guuleysan. Tani waxay soo jeedinaysaa in halka fikradaha uu yaabo in ay wax raadayn, isaga qudhiisuse wuxuu ku yar sidaasayna ahaatay. Si kastaba ha ahaatee waxaa Bentham maanta caadi ahaan loo arkaa sida “aabbihiis ruuxiga ah” ee UCL, sida uu fikradaha xagjirka ah ku saabsan waxbarashada iyo bulshada ahaayeen waxyooday inay Aasaasayaasha ee xannaanada, gaar ahaan Scotsmen James Mill (1773-1836) iyo Henry Brougham (1778-1868).
In 1827, Guddoomiye ku Dhaqaalaha Siyaasadda ee Jaamacadda London waxaa la abuuray, oo Yooxanaa la Ramsay McCulloch sida xilka ugu horeysay, asaasidda mid ka mid ah waaxaha ugu horeysay ee dhaqaalaha ee England. In 1828 Jaamacada noqday ciyaaryahankii ugu horeeyay ee England si ay u bixiyaan Ingiriisi sida maaddo iyo waxbaridda Classics iyo daawo bilaabay. In 1830, Jaamacadda London aasaasay School University London, taasi oo markii dambe noqday lahaa University College School. In 1833, jaamacad la amray Alexander Maconochie, Xoghayaha si Royal Society ee dhuleed, sida professor koowaad ee juqraafiga ee UK. In 1834, University College Hospital (asal ahaan Hospital North London) furay isbitaalka waxbarashada dugsiga caafimaadka ee jaamacadda ah.
In 1836, Jaamacadda London ayaa la dhexgeliyey by Royal Charter magaca University College, London. Oo isla maalintaas, Jaamacadda London waxaa la abuuray by charter boqornimada sida degree-marinta guddiga baarista ee ardayda dugsiyada iyo kulliyadaha la jaalka, la College University iyo King ayaa College, London lagu magacaabay labada xulufadeeda ugu horeysay ee dastuurka.
School Slade The of Fine Art la aasaasay 1871 soo socda ka tagav saan ka Felix Slade.
In 1878 Jaamacadda London helay charter a dheeraadka ah waxaa jaamacad ugu horeeyay ee British samaynta inaan loo ogolaan inuu darajo abaalmarinta haweenka. isla sanadkaas, UCL qirtay haweenka si Caqlina Arts iyo Sharciga iyo Sayniska, inkastoo dumarka iska sii mamnuucay Caqlina Engineering iyo Medicine (marka laga reebo koorsooyin ku saabsan caafimaadka dadweynaha iyo nadaafadda). Iyadoo UCL ayaa sheegay in ay ku jirtay jaamacadda ugu horeysay ee England si ay u galin Haweenka siman niman, ka 1878, Jaamacadda Bristol ayaa sidoo kale ka dhigaysa labo geesood ah, isagoo haweenka qirtay ka aasaaskeedii (sida kulliyad) in 1876. Armstrong College, hay'ad horeeyey ee Jaamacadda Newcastle a, Haweenka ayaa sidoo kale loo ogol yahay inay soo galaan ka aasaaskeedii in 1871, inkastoo midkoodna run ahaantii ku qoran ilaa 1881. ugu dambeyntii Haweenka ayaa la dhigey cilmiga caafimaadka intii lagu jiray Dagaalkii Adduunka ee First 1917, inkastoo dagaalka ka dib dhamaaday xadeynta la dhigay on tiradoodu.
In 1898, Sir William Ramsay helay xubno ka krypton, iyakana iyo xenon halka professor of kiimikada ee UCL.
In 1900 Jaamacadda London waxaa dheeyey sida jaamacad federal la qaynuunnadayda cusub soo saaro hoos u University of Act London 1898. UCL, oo ay la socdaan tiro ka mid ah kuliyadaha kale ee London, noqday dugsi oo ka mid ah University of London. Iyada oo inta badan oo ka mid ah hay'adaha dastuurka ceshan madaxbanaanidooda, UCL waxaa darsadeen University ee 1907 hoos College University ee London (Transfer) Act 1905 oo laga badiyay ay xorriyadda sharciga ah.
1900 sidoo kale arkay go'aanka doorta madaxa mushahar ee kulliyadda. korkanaga kowaad wuxuu ahaa Carey Foster, oo ahaan jiray maamulaha (sida boostada waxaa markii hore oo cinwaankeedu ahaa) ka 1900 si ay u 1904. Waxa uu ku guuleystay by Gregory Foster (la xiriirta ma), iyo in 1906 horyaalka waa beddelmay in Provost si looga fogaado jahawareer la Maamulaha of University of London. Gregory Foster ku hadhay post ilaa 1929.
In 1906 Dhismaha Cruciform la furay sida guriga cusub ee Isbitaalka University College.
UCL gaaray dhaawac bam badan inta lagu jiro dagaalkii labaad ee dunida, oo ay ku jiraan in Hall Great iyo Laboratory Carey Foster Physics. The magazine ardayga UCL ugu horeysay, Pi Magazine, waxaa la daabacay markii ugu horeysay ee 21 February 1946. The Institute of Studies Yuhuudda raray UCL ee 1959. Mullard Space Science Laboratory waxay ku sii dhisnaatay 1967. In 1973, UCL noqday link ugu horeeyay ee caalami ah si maamaan ah ee internet-ka, ARPANET ah.
Inkastoo UCL ku dhex jaamacadaha ugu horeeyay ee galiyo dumarka sida ku xusan shuruudaha la mid ah sida nin ahaa, in 1878, qolka caadiga ah college ee sare, Housman Room ah, ku hadhay nin oo kaliya ilaa 1969. Ka dib laba isku day lagu guulaysan mooshin la ansixiyay in dhamaaday kalasaar by galmo ee UCL. Tani waxaa lagu gaari by Brian Woledge (Fielden Professor of Faransiis ee UCL ka 1939 si ay u 1971) iyo David Colquhoun, wakhtigaas oo bare ka ah dhallinyarada ee Farmashiiste.
In 1976, charter cusub soo celiyey madax-bannaanida sharci UCL ee, inkastoo wali aan awood u leeyahay inuu abaalmarinta darajo u gaar ah. Under charter this kulliyadda noqday si rasmi ah loo yaqaan University College London, hore si rasmi ah u la “University of London, University College” tan iyo markii ay Iskudarka galay Jaamacadda. Magacani wuxuu tagay comma loo isticmaalay magaceeda hore ee “University College, London”.
In 1986, UCL ku biireen la Institute of Qadiimiga. In 1988 UCL ku biireen la Institute of Laryngology & Otology, Institute of lafaha, Machadka urology & Kelyaha iyo Hospital Middlesex School Medical.
In 1993 kor u gariireen oo ka tirsan jaamacadda London ah loogu tala galay in UCL (iyo kulliyadaha kale) fursad u helay si toos ah maalgelinta dawladda iyo xaq u leeyihiin inay wada tashi University of London naftooda fashay. Tani waxay keentay in UCL loo arkaa a Qolyihii jaamacad in ay xaq u gaarka ah.
In 1994 NHS University College London Hospitals Trust waxaa la aasaasay. UCL ku biireen la College of Sciences Hadalka iyo theInstitute indhaha ku 1995, Machadka Caafimaadka Carruurta iyo School of Cagaha in 1996 iyo Institute of Neerfaha ee 1997. In 1998 UCL ku biireen School Medical Hospital Royal Free ah si ay u abuuraan Free Royal iyo University School Medical College (baxshay Dugsiga Caafimaadka UCL ee October 2008). In 1999 UCL ku biireen la School of Slavonic iyo Studies Yurub East iyo Eastman Institute ilkaha.
UCL Jill Dando Institute of Science Crime, waaxda ugu horeysay jaamacad in dunida gaar u ah kahortagga yaraynta dambiyada, waxaa la aasaasay bishii 2001.
Soo jeedinta wax ku biirto u dhexeeya UCL iyo Imperial College London ayaa ku dhawaaqay in 2002. Hindisaha ayaa ka xanaajisay shaqaalaha UCL waxbaridda iyo ardayda iyo ururka AUT mucaaradka xoog, oo dhaleeceeyay “dhaqso u foolxun iyo la'aanta tashiga”, taasoo keentay in ay baxsi by ee UCL Provost Sir Derek Roberts. The blogs in ka caawiyay in ay joojiyaan midowgii, waa sii raagayaan, in kastoo qaar ka mid ah links ee hadda jebisay: arki David Colquhoun ee blog, iyo Save UCL blog halkii ka badan horyalka Talyaaniga, kaas oo ay maamusho David Conway, arday postgraduate in waaxda Cibraaniga iyo waxbarashada Yuhuudda.
Xarunta London ee Nanotechnology la aasaasay 2003 sida shirkad ay wada leeyihiin UCL iyo Imperial College London.
Tan iyo markii ay 2003, marka UCL Professor David Latchman noqday Master of Birkbeck deriska, Abuur ahayn, uu isku soo dhawaansho u dhaxeeya labadan University of London kulliyadaha, iyo shakhsi haysaa waaxaha labada. xarumaha cilmi-baarista Wadajirka ka mid ah UCL / Institute Birkbeck ee Planetary Earth iyo Sciences, UCL / Birkbeck / IoE Xarunta Neuroscience Waxbarashada, UCL / Birkbeck Institute of Biology dhismayaasha iyo kelli, iyo Xarunta Birkbeck-UCL ee Neuroimaging.
In 2005, UCL waxaa ugu danbeyn siiyay gaar ah awoodaha ay baray oo degree cilmi abaal marinta iyo dhammaan ardayda cusub UCL diiwaan ka 2007/08 soo baxday la degrees UCL. Sidoo kale in 2005, UCL ansixiyay a brandingeksperten cusub shirkadaha, oo hoostiisa, iyo waxyaabo kale, magaca University College London ayaa waxaa bedelay initialism fudud UCL ee isgaarsiinta oo dhan dibadda. Isla sanadkaas cusub 422 milyan oo £ dhismaha weyn oo la furay, waayo, Isbitaalka University College ee Euston Road, Machadka Dhegaha UCL la aasaasay iyo dhismaha cusub ee Dugsiga UCL ee Slavonic iyo Bariga Studies Yurub oo la furay.
In 2007, UCL Cancer Institute la furay ee dhawaan la dhisay Paul O'Gorman Building. Bishii August 2008 UCL sameeyay UCL Partners, xarun sayniska caafimaadka tacliimeed, la Great Ormond Street Hospital ee Carruurta NHS Trust, Hospital Moorfields Eye NHS Foundation Trust, Royal Free London NHS Foundation Trust oo University Hospitals London College NHS Foundation Trust. In 2008 UCL aasaasay School UCL ee Energy & Resources ee Adelaide, Australia, campus ugu horeysay ee jaamacad British dalka. Dugsiga wuxuu ku salaysan yahay in Torrens Dhismaha taariikhiga ah ee Victoria Square iyo Abuurkiisa raacay wadahadal dhexmaray UCL ku xigeenka Provost Michael Worton iyo South Australian Premier Mike Rann.
In 2009, ah Yale UCL Collaborative waxaa la aasaasay dhexeeya UCL, UCL Partners, Yale University, Yale School of Medicine iyo Yale - Hospital Haven New. Waa wada shaqeyn ugu weyn ee taariikhda labada jaamacad, iyo baaxadda ay taasi keentay inuu la kordhiyay in ka insaaniyadda sayniska arrimaha bulshada.
In June 2011, the mining company BHP Billiton agreed to donate A$10 million to UCL to fund the establishment of two energy institutes – the Energy Policy Institute, based in Adelaide, and the Institute for Sustainable Resources, based in London. Bishii November 2011 UCL announced plans for a £500 million investment in its main Bloomsbury campus over 10 sano, and the establishment of a new 23-acre campus next to the Olympic Park in Stratford in the East End of London. It revised its plans of expansion in East London and in December 2014 announced to build a campus UCL East covering 11 acres and provide up to 125,000m2 of space on Queen Elizabeth Olympic Park. UCL East will be a part of the planned Olympicopolis that plans to transform the Olympic Park into a cultural and innovation hub where UCL will open its first school of design, a centre of experimental engineering and a museum of the future, along with a living space for students.
The School of Pharmacy, University of London merged with UCL on 1 January 2012, becoming the UCL School of Pharmacy within the Faculty of Life Sciences. In May 2012, UCL, Imperial College London and the semiconductor company Intel announced the establishment of the Intel Collaborative Research Institute for Sustainable Connected Cities, machad ku salaysan London cilmi mustaqbalka ee magaalooyinka.
Bishii August 2012 UCL received criticism for advertising an unpaid research position; it subsequently withdrew the advert.
UCL and the Institute of Education formed a strategic alliance in October 2012, including co-operation in teaching, research and the development of the London schools system. Bishii February 2014 the two institutions announced their intention to merge and the merger was completed in December 2014.
In October 2013 it was announced that the Translation Studies Unit of Imperial College London would move to UCL, becoming part of the UCL School of European Languages, Dhaqanka iyo Bulshada. Bishii December 2013, it was announced that UCL and the academic publishing company Elsevier will collaborate to establish the UCL Big Data Institute. Bishii Janaayo 2015 it was announced that UCL had been selected by the UK government to be one of the five founder members of the Alan Turing Institute (together with the universities of Cambridge, Edinburgh, Oxford and Warwick), an institute to be established at the British Library to promote the development and use of advanced mathematics, sayniska kombiyuutarka, algorithms and Big Data.
Ma rabtaa wada hadlaan University College London ? su'aal kasta, comments ama dib u eegista
Photos: University College London rasmiga ah Facebook